Home Wararka Gudaha Galmudug oo sheegtay in dagaalkii Baxdo lagu dilay dagaalyahano Ajnabi ah
Galmudug oo sheegtay in dagaalkii Baxdo lagu dilay dagaalyahano Ajnabi ah
Madaxweynaha maamulka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaariye ayaa ku bogaadiyay maamulka, shacabka iyo culimada degmada Baxdo, ciidamada Daraawiishta Galmudug iyo kuwa qalabka sida, sida geesinimada leh oo ay saaka iskaga difaaceen weerarkii ay Shabaab kusoo qaaday degmada Baxdo.
Dowladda Galmudug ayaa ku ammaantay Ciidamada qalabka sida, maamulka iyo shacabka degmada Baxdo sida feejignaanta leh oo ay uga hortageen Al-Ahabaab oo xogtooda la sii hayay, halkaasna ay kala kulmeen dharbaaxo, kagana carareen maydad gaaraya 70 oo ay kamid yihiin sedex ajaanib ah, hub iyo saanad fara badan iyo gaari ay ku diyaariyeen walxaha qarxa oo lala damacsanaa in lagu wax yeeleeyo shacabka degmada Baxdo.
Maamulka Galmudug waxa ay xaqiijinaysay weerarka kadib, Ciidamada Daraawiishta Galmudug iyo kuwa qalabka sida ay ka howlgaleen deeganada hoos taga degmada Baxdo oo ay ku baacsadeen haraadiga Al-Shabaab ahaa ee weerarka soo qaaday, iyagoona halkaas ugu dhigay cashar lama ilaawaan ah sida ay sheegatay Madaxtooyadda Galmudug.
Maamulka Galmudug waxa ay ku tilmaamtay dagaalkii shalay lagu jabiyay Al-Shabaab uu ahaa mid taariikhi ah, ayna mudantahay in geesinimada ay muujiyeen reer Baxdo in ay kaga tusaale qaataan shacabka Galmudug iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed.
Previous articleGuddoomiyaha Degmada Buulo Burte ee Gobolka Hiiraan oo ka qaylo dhaamiyay cunno la’aan ka jirta Magaaladaas.
Next article𝗫𝗼𝗴𝗵𝗮𝘆𝗮𝗵𝗮 𝗚𝘂𝘂𝗱 𝗘𝗲 𝗫𝗶𝘀𝗯𝗶𝗴𝗮 𝗪𝗮𝗱𝗱𝗮𝗻𝗶 𝗢𝗼 𝗦𝗵𝗲𝗲𝗴𝗮𝘆 𝗜𝗻 𝗫𝗮𝗹𝗮𝘆 𝗚𝘂𝗿𝗶𝗴𝗶𝗶𝘀𝗮 𝗟𝗮 𝗪𝗲𝗲𝗿𝗮𝗿𝗮𝘆